နှင်းမှုန်ကြားက ပီလီကစ် ၊ နောက်တဆင့်တက်တဲ့ ယူနိုက်တက် ၊ ဆိုးရှား နေရာကို ရောက်လာနိုင်တဲ့ ဘာဆာနည်းပြဟောင်း တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ - xyznews.co
နှင်းမှုန်ကြားက ပီလီကစ် ၊ နောက်တဆင့်တက်တဲ့ ယူနိုက်တက် ၊ ဆိုးရှား နေရာကို ရောက်လာနိုင်တဲ့ ဘာဆာနည်းပြဟောင်း တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
မနေ့ညက ကစား သွားခဲ့တဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် အုပ်စု ပွဲစဉ်တွေ အပြီး မှာတော့ ချဲလ်ဆီး နဲ့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် တို့ဟာ ရှုံးထွက် အဆင့်တွေ ကို တက်ရောက် သွားနိုင် ခဲ့ကြပါတယ် ။
မန်ယူနိုက်တက် ဟာ အဝေးကွင်းမှာ ဗီလာရီးရဲ ကို ၂-၀ နဲ့ အနိုင် ကစားခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ချဲလ်ဆီး ကတော့ အိမ်ကွင်းမှာ ယူဗင်တပ် ကို ၄-၀ နဲ့ အပြတ်အသတ် အနိုင် ရယူခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဗီလာရီးရဲ ကတော့ အတ္တလန်တာ ရဲ့ သရေကျမှုကြောင့် သက်သာရာ ရခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးပိတ်ပွဲစဉ် မှာ သရေ ကစားနိုင်ရုံ နဲ့ ရှုံးထွက် အဆင့် တက်ရောက်ခွင့်ကို ရယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဘိုင်ယန်မြုးနစ် ကတော့ အဝေးကွင်းမှာ ဒိုင်နမိုကိဗ် ကို နှင်းတွေ ထူထပ်စွာ ကျရောက်နေတဲ့ ရာသီဥတု အောက်မှာ ၂-၁ နဲ့ အနိုင် ကစားသွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဒီပွဲမှာ ဘိုင်ယန် တိုက်စစ်မှူးကြီး ရောဘတ် လီဝန်ဒေါ့စကီး ဟာ လှပတဲ့ နောက်ပြန် ကန်ချက် နဲ့ ဂိုးသွင်းယူ ပေးသွားခဲ့ ပါတယ် ။
လိုင်လီ ၊ ဆီဗီးလား တို့ ပါဝင်တဲ့ အုပ်စု G ကတော့ မနေ့ညက အိမ်ရှင်တွေ အနိုင်ရခဲ့မှုဟာ နောက်ဆုံးပိတ် ပွဲစဉ် အထိ အကျိတ်အနယ် ဖြစ်ဖို့ ဖန်တီးလာခဲ့ ပါတယ် ။ ပွဲစဉ် ၅ ပြီးသည်အထိ လိုင်လီ က ၈ မှတ် ၊ ဆဲလ်ဘတ် က ၇ မှတ် ၊ ဆီဗီးလား က ၆ မှတ် ၊ ဝုဖ်ဘတ် က ၅ မှတ် နဲ့ ရှိနေခဲ့ကြ ပါတယ် ။
ချဲလ်ဆီး ကွင်းလယ်လူဟောင်း ဂျိုကိုးလ် ကတော့ အီတလီ ထိပ်သီး ယူဗင်တပ် ကို အိမ်ကွင်းမှာ ၄ ဂိုးပြတ် အနိုင် ကစားခဲ့တဲ့ ချဲလ်ဆီး ရဲ့ ခြေစွမ်းကို ချီးကျူး ခဲ့ပြီး ယူဗင်တပ် အနေနဲ့ ၄ ဂိုးတည်း ပေးခဲ့ရတာ ကို ကံကောင်းတယ်လို့ မှတ်ယူနိုင်ကြောင်း ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
နည်းပြ ဆိုးရှား မရှိတော့ ပေမယ့်လည်း ဂျက်ဆီလင်ဂတ် ကတော့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ကနေ ထွက်ခွာဖို့ ကို ဆန္ဒ ရှိနေဆဲ ဖြစ်တယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
ဂျာမန် ကလပ် လိုက်ပ်ဇစ် အသင်းရဲ့ နည်းပြ ဂျက်ဆီ မာ့စ်ချ် နဲ့ ဂိုးသမား ပီတာ ဂူလက်ဆီ တို့ဟာ ကိုဗစ်ပိုး တွေ့ရှိ ခဲ့မှုကြောင့် ဒီညမှာ ကစားမယ့် ချန်ပီယံလိဂ် ပွဲစဉ် ကို ပါဝင် နိုင်တော့မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ သိရ ပါတယ် ။
ဂျာမနီ မှာ ကိုဗစ်ပိုး ပြန်လည် ထကြွ နေပြီး လိုက်ပ်ဇစ် ဟာ တပတ် အတွင်း ကိုဗစ်ပိုး တွေ့ရှိတဲ့ စတုတ္ထမြောက် ဂျာမန် ကလပ် ဖြစ်လာခဲ့ ပါတယ် ။
ယူဗင်တပ် တိုက်စစ်မှူးဟောင်း အလက်ဆန်ဒရို ဒယ်လ်ပီယာရို ဟာ ယူဗင်တပ် ရဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် ပွဲစဉ် အတွက် လန်ဒန်ကို ရောက်လာစဉ် အတွင်း အသင်းဖော်ဟောင်း ကွန်တီ ကိုင်တွယ် နေတဲ့ တော့တင်ဟမ် ဟော့စပါး လေ့ကျင့်ရေးကွင်းကို လာရောက် လည်ပတ် သွားခဲ့တယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
နယူးကာဆယ် နည်းပြသစ် အက်ဒီဟိုဝီ ကတော့ အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် ရဲ့ အင်္ဂလန် ညာနောက်ခံလူ ကီရန် ထရစ်ပီယာ ကို သူ့ရဲ့ ပထမဆုံးသော ဇန်နဝါရီ ပစ်မှတ် အဖြစ် သတ်မှတ် ထားတယ်လို့ သတင်း ထွက်ပေါ် လာခဲ့ ပါတယ် ။
အာဆင်နယ် အသင်းဟာ ရိုမေးနီးယား ပြည်တွင်း ကလပ် မှာ ကစားနေတဲ့ အသက် ၁၈ နှစ် အရွယ် ယူ-၂၁ အသင်းသားလေး Ianis Stoica ကို စောင့်ကြည့် ကင်းထောက် နေတယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
နောက်ဆုံး ကြားသိရတဲ့ သတင်းအရ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် တာဝန်ရှိသူတွေဟာ ဘာစီလိုနာ နည်းပြဟောင်း အာနက်စ်တို ဗယ်ဗာဒီ ကို ယာယီ နည်းပြ အဖြစ် ခန့်အပ်ဖို့ စိတ်ကူး လာတယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
မန်ယူနိုက်တက် ကစားသမားဟောင်းတွေ ကတော့ ပိုချက်တီနို ကို ပိုမို ဆန္ဒ ရှိနေကြပြီး တိုက်စစ်မှူးဟောင်း မာ့ဟုချ် ကလည်း ပိုချက်တီနို ကို ထောက်ခံ ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ပိုချက်တီနို ဟာ PSG ကို ကိုင်တွယ် ရာမှာ အဆင်မပြေမှုတွေ ရှိနေပြီး အသင်းသားတွေ ထဲမှာလည်း ပိုချက်တီနို ထွက်သွားပါက ဝမ်းနည်းမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောဆိုသူတွေ ရှိနေတယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
ဒိန်းမတ် လက်ရွေးစင် အသင်းဟာ လာမယ့် ၂၀၂၂ ဇန်နဝါရီမှာ ပေးအပ်မယ့် FIFA ရဲ့ တနှစ်တာ အကောင်းဆုံး ဆုပေးပွဲမှာ FIFA Fair Play Award ကို ရရှိမယ်လို့ သတင်း ထွက်ပေါ် လာခဲ့ ပါတယ် ခင်ဗျာ . . . ။
Previous Article ပထမပိုင်းအပြီး ကာရစ် ဘာပြောခဲ့သလဲဆိုတာ ဖွင့်ဟလိုက်တဲ့ မက်ဂွားယား
Next Article မရောက်တာကြာပြီဖြစ်တဲ့ ယူရိုပါလိဂ် ကို ဆင်းသွားရကိန်းနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပြီဖြစ်တဲ့ ဘာစီလိုနာ အသင်